विकास बैंक पनि बाणिज्य बैंक भन्दा कम छैनन् : विनय रिजाल - Arthikbazar.com
२०७५ पुष १३ | अप्सरा गौतम
Arthikbazar.com – २२ बर्षे वित्तीय क्षेत्रमा अनुभव सम्हाल्नु भएका सहयोगी विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ विनय रिजाल । एमबीए सम्मको अध्ययन गर्नुभएका रिजालसँग ‘क’ वर्गका बाणिज्य बैंकको विभिन्न महत्वपूर्ण विभागहरुको अनुभव छ । विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको र विभिन्न तालिमको पनि अनुभव छ । एनबी बैंकको शाखा स्थापना गराएर निजीक्षेत्रको बैंकलाई जनकपुरमा पहिलो पटक भित्र्याउन विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुभएका रिजाल अहिले त्यहीँ पुगेर स्थानीयलाई सेवा प्रदान गरिरहनुभएको छ । सहयोगीमा उहाँ आएको पनि एक बर्ष भएको छ । उहाँले आफ्नो एक बर्ष बैंक, ग्राहक र सेयरधनीको वृहत्तर हितमा सदुपयोग गरेको बताउनुभएको छ । प्रस्तुत छ, बैंकको समग्र अवस्थाको बारेमा आर्थिक बजार डटकमका लागि रिजालसँग गरिएको कुराकानी :
सहयोगी विकास बैंकले पछिल्लो समयमा उत्साहजनक प्रगति गर्न सफल भयो । यो कसरी संभव भयो ?
मेहनत गर्दा असंभव म केही देख्दिन । मैले बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व सम्हाले पछि पहिलाको अवस्थालाई व्यापक सुधार गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने योजना बनाएरै लागे । मेरो योजनालाई सफल बनाउन बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समिति साथै सबै कर्मचारीहरुले साथ दिनुभयो । त्यसैले पछिल्लो समयमा बैंकले आफ्नो नाफामा छलाङ मा-यो भने अन्य प्रगतिहरु पनि उत्साहजनक छन् । मेरो वित्तीय क्षेत्रमा २२ बर्षको अनुभव काम लाग्यो । विकास बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा मेरो पहिला अनुभव भएपनि समग्र वित्तीय क्षेत्रको अनुभव र बैंक सञ्चालनको लागि आवश्यक ज्ञान, योग्यता र क्षमताले पनि यो बैंकलाई सफल ढंगले अगाडि बढाउन मद्दत गरिरहेको छ ।
यो बैंकमा तपाईको एक बर्षे कार्यकाल पुरा भएको छ । एक बर्षे कार्यकालमा भए गरेको प्रगतिको समिक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
यो एक बर्षे कार्यकालको समिक्षा गर्नुपर्दा म आउँदा सहयोगी विकास बैंकको अवस्था राम्रो थिएन । कर्मचारीहरुमा अन्योलको अवस्था थियो । कर्मचारीहरुको राजिनामाको बाढी आएको थियो । बजारमा शाख गिरेको र निक्षेप कर्ताहरुमा विश्वास कम भएको अवस्था थियो । वित्तीय सुधार गर्नुपर्ने धेरै थियो । नीतिगत कुराहरु देखी प्रविधीमा कर्मचारीहरुको क्षमता वृद्धी गर्नु पर्ने मुख्य challenge थियो । मैले भन्नै पर्दा बैंकमा उत्साहजनक परिवर्तन ल्याउन म सफल भएको छु । यो कुरा मैले भन्ने भन्दा पनि तथ्यांकले भन्ने कुरा हो । यो कुरालाई पुष्टि गर्न बैंकमा धेरै तथ्यांकहरु परिवर्तन भएका छन्। यसको अध्ययन गरी मेरो कार्यको मूल्यांकन गर्ने काम बैंकका सञ्चालक, सेयरधनी र कर्मचारीहरुको हो ।
अहिले समग्र वित्तीय क्षेत्र असहज परिस्थितिबाट अगाडि बढिरहेको कुरा पनि सबै सामु छर्लङ्ग छ। यस्तो अवस्थामा पनि सहयोगी विकास बैंकमा मेरो कार्यकालमा परिवर्तन भएका तथ्य तथ्यांक प्रगतिमय छन् । विगतको तुलनामा बैंकले गरेको प्रगतिलाई मैले उत्साहजनक प्रगतिको रुपमा लिएको छु । यसलै मैले मेरो एक बर्षे कार्यकाल पनि सफल भएको मेरो बुझाई छ । बैंकको सेवा, सुविधा र ग्राहकमुखी अवधारणालाई सहयोग पु-याउने क्रार्यक्रम, विषय वस्तु र सुविधाले हाल सहयोगी विकास बैंकलाई अझ सवल र सक्षम बनाएको छ ।
तपाईको कार्यकालमा भए गरेका प्रगतिहरु के कस्ता रहेका छन् ?
मेरो कार्यकालमा बैंकमा धेरै परिवर्तन र प्रगतिहरु भएका छन् । हालै प्रकाशित चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार प्रति सेयर आम्दानीमा सहयोगी विकास बैंकले नेपालका सबै विकास बैंकलाई उछिनेको थियो । यो हामी सबैको लागि गर्ब गर्न लायक उपलब्धीको विषय हो । त्यसपछि चालु आबको पहिलो त्रैमासमा बैंकले ३०० प्रतिशतले नाफा बृद्धि गरी ३ जिल्लामा कार्यरत बैंक मध्ये आफूलाई अग्रस्थानमा राख्न बैंक सफल भयो । यसलाई पनि उपलब्धिकै रुपमा लिनुपर्छ । बैंकले आफ्नो ८ वटा शाखालाई बृद्धि गरी यस बीचमा ११ वटा बनाउन सफल भयो । थप तीन स्थानमा शाखा सञ्चालनमा ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । त्यसैगरी बैंकले आफ्नो सेवाको दायरा फराकिलो बनाउन यसै आर्थिक बर्षभित्र १७ शाखा पु-याउने गरी काम गरिरहेको छ । यसरी बैंकको कार्यक्षेत्र बृद्धिसँगै बैंकका सन्तुष्ट ग्राहकहरु ६०,००० बाट बढेर ७५,००० पुगेका छन् । प्रविधिमा पनि बैंकले निक्कै फड्को मा-यो । २१ औं शताब्दी समय सुहाउँदो सेवाबाट ग्राहकलाई विमुख पार्नुहुन्न भन्ने उद्देश्यले मोवाइल बैंकिङ र प्रिभिलेज बैंकिङ सर्भिसेज सेवा सुरु गरिसकेको छ । एटीएम सेवा NPN / VISA सुरु भएको छ । बैंकले आफ्नै आधुनिक भवन निर्माण गरी आफ्नै आधुनिक भवनबाट ग्राहकहरुलाई अझ प्रभावकारी सेवा दिने प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिले तयार भएका र हुँदै गरेको आधार र पूर्वाधारले आगामी दिनमा धेरै भन्दा धेरै ग्राहकहरुलाई समय सुहाउँदो र अझ प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदान गर्न हामी सक्षम हुनेछौं । बैंकको सेवालाई विविधिकरण गरी थप ग्राहकलाई बैंकमा जोड्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ । हामी paperless बैंकिङ्ग तिर जादै छौं ।
बैंकले एटीएम सेवा सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको थियो ? यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
बैंकले एटीएम सेवा सुरु गरी हाल परिक्षण अवस्थामा छ । जडान गरिसकिएको यो एटीएम मेशिनबाट पैसा निकाल्ने र परिक्षण गर्ने काम कर्मचारीहरुबाट भइरहेको छ । यो परिक्षण अवधि सकिएपछि औपचारिक कार्यक्रम गरी एटीएम सेवा सुरु गर्ने योजना रहेको छ । जुन निकट भविष्यमै हुनेछ । एटीएम सेवा सुरुमा बैंकको मूख्य कार्यालय जनकपुरका साथै महोत्तरीको गौशाला र बर्दिबासमा राखीएको छ । त्यसपछि क्रमशः महेन्द्रनगर शाखा, जलेश्वर शाखा र जानकी मन्दिर परिसरमा अन्य तथा संभाव्यता स्थानमा एटीएम मेशिन राखी सेवा प्रदान गरिने छ । हामीले राखिएको एटीएम सेवा भिसा कार्डको हो । यसको नेटवर्क भएका सबै स्थानमा यो कार्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपालका साथै यो कार्ड भारत र भुटानमा समेत प्रयोग गर्न मिल्छ । यो कार्डले सामान खरिद गर्दा ‘पोउस’ सुविधाद्धारा किनमेल गर्न मिल्छ । यस पछि हामी Tab Banking मा लाग्नेछौं । अनि पछिलाई हामीले मास्टर कार्डको सोच बनाएका छौं ।
बैंकले गरेको पछिल्लो प्रगतिप्रति तपाई कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको असहज परिस्थितिका बाबजुद पनि मेरा कार्यकालमा म र मेरो टिमले गरेको प्रयासले बैंकले एक किसिमको फड्को मारेकै हो । यो सँगै बैंकको नाम र प्रतिष्ठा देशव्यापी बनाउने काममा पनि बैंकलाई धेरै हदसम्म सफलता मिलेको छ । यसलाई हामी सबैले स्वीकार्नै पर्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकले गरेको यो प्रगति प्रति म सन्तुष्ट छु । तर यति नै प्रगतिमा भने म पनि चित्त बुझाएर बस्ने पक्षमा छैन । बैंकमा म आउँदा मेरो बैंकिङ क्षेत्रमा विगत २२ बर्षको अनुभव सदुपयोग गरेर बैंकको प्रगति र प्रतिष्ठालाई उचाईमा पु-याउछु भनेर प्रतिबद्धताका साथ आएको हुँ । त्यसैले हामीले बैंकको प्रगति र प्रतिष्ठालाई अझ उचाईमा पु-याउने गरी प्रगति गर्नुपर्छ भन्ने मलाई सधै लाग्छ । अहिले हामी पुरै ‘टिम’ त्यसरी नै काम गरिरहेका छौं । प्रगतिका सबै आर्थिक सुचकांकहरु आगामी दिनमा अझ सुधार गर्दै बैंकले प्रगतिको ठूलो फड्को मार्ने र शेयर बजारमा शेयर मूल्य राम्रो प्रतिफल दिने प्रति हामी पुरै टिम प्रतिबद्ध छौं । बैंकमा खुलेर काम गर्ने वातावरण बने आगामी दिनमा हाम्रो यो लक्ष्य सहजै पुरा हुनेमा म विश्वस्त पनि छु । हालको अवस्थामा पनि बैंकको सेयर मुल्य राम्रो छ । १ वर्षमा भएको उपलब्धीहरु विगत्त १५ वर्षको भन्दा राम्रो छ । काम गर्ने वातावरण भयो भने अझ उचाइमा पुग्छ ।
प्रगतिका सुचकांकमा बैंकलाई केही सफलता मिलेको छ । आन्तरिक व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन र आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासनका विषयमा बैंक कसरी अगाडि बढेको छ ?
बैंक वित्तीय संस्थामात्रै होइन कुनै पनि संस्थाको लागि आन्तरिक व्यवस्थापन, संस्थागन सुशासन र आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा हो । अझ वित्तीय संस्था जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा त यो विषय झनै महत्वपूर्ण शर्त नै भइहाल्छ । यसप्रति म लगायत मेरो पुरै टिम सचेत छ । यी कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर र पालना गर्दै जाँदा संस्थालाई अगाडि बढाउँछ, त्यस्ता संस्थाले कहिले समस्यामा अल्झिनु पर्दैन । हामीले संस्थालाई ‘सिष्टम’ले चलाउनु पर्छ र चल्न दिनुपर्छ । जुन कुरा सहयोगी विकास बैंकमा हाल आएर देख्न सकिन्छ । वित्तीय संस्थालाई अगाडि बढाउने हाम्रो नीति, रणनीति, विधि र प्रविधिले गर्दा नै बैंकले आफ्नो प्रगतिको सुचकांकलाई आफ्नो लक्ष्यतिर अगाडि बढाइरहेको हो । यसमा संचालक समिति र व्यवस्थापनको सदैब मेल हुनुपर्छ । अन्यथा चल्न सक्दैन । जुन कुराहाल आएर विभीन्न अरु विकास बैंकहरुमा देखिएको पत्र पत्रीकामा देखीन्छ ।
बैंकलाई कस्तो बनाउने तपाईको लक्ष्य रहेको छ ?
सहयोगी विकास बैंक आफैमा बलियो विकास बैंक हो । यसको स्थापना २०६० सालमा भएको हो । आजका दिनमा यो बैंक १५ वर्ष पुरा गरी १६ औं वर्षमा हिडिरहेको छ । यस बैंकले त्यस समयमा खासै प्रगति गर्न सकेन, समय सापेक्ष आफूलाई बिस्तारित गर्न नसकेको हो । बिगत ५/६ वर्षको वासलात हेर्ने हो भने आफ्नो समकक्षी बैंकहरुमा सहयोगी विकास बैंक पछि परेको नै हो । आजको दिनमा यो राष्ट्रियस्तर विकास बैंकको रुपमा परिणत भइसक्नु पर्ने हो, तर हुन सकेन । मैले सहयोगी विकास बैंकलाई अब राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बनाउने गरी काम गरिरहेको छु । मेरो आगामी लक्ष्य पनि बैंकको ग्राहकमूखि सेवालाई देशभरका ग्राहकसामू पु¥याउनु रहको छ । सहयोगी विकास बैंकलाई राष्ट्रीय स्तरको बनाउन मैले कुनै चुनौती देख्दिन, केवल पूँजी व्यवस्थापन र कर्मचारी व्यवस्थापज मात्र भए पुग्छ ।
बैंकको चुक्ता पूँजी कति छ ? बैंकमा निक्षेप र कर्जा लगानी तथा कोषहरुको अवस्था कस्तो छ ?
५० करोड ९६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ चुक्ता सेयर पूँजी रहेको बैंकले हालसम्म रू. ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख निक्षेप संकलन गरी, ३ अर्ब ७५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । त्यसैगरी बैंकमा २३ करोड ६४ लाख संचिति कोष रहेको छ । यसपाली बैंकले १७५ लाभांसको घोषणा गरेको छ । हालको अवस्थामा यो घोषणा बजारको स्थिति हेर्दा धेरै राम्रो रहेको मैले पाएको छु । समग्रत भन्नु पर्दा बैंकको अवस्था बलीयो छ ।
कर्जा लगानी लागी बैंकले के कस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ? कर्जा असूलीको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
यस बैंकले विशेषगरी कृषि, उद्योग, व्यापार व्यवसायका अतिरिक्त सामाजिक र कृषीश्रेत्रमा बढी लगानी भएको छ । यसका साथै हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशित गरेका बिपन्न वर्ग र प्राथमिक क्षेत्रहरुमा पनि लगानी गरेका छौं । यस बैंकले ग्रामीण भेगका ब्यक्तिहरुका लागि उपयुक्त हुने खालका क्षेत्रहरुमा लगानी गरेको छ । माइक्रो लेन्डिङ्गको संरचनालाई पनि प्रयोगमा ल्याउने बिचार छ । त्यस्तै सवारीसाधान खरिद गर्न, घरायशी सामान किन्न, गृहिणी कर्जा सुविधा, युवाहरुलाई विदेश जान वा व्यवसाय गर्न पनि युवा कर्जा शिर्षकमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसैगरी विवाह लगायतका सामाजिक कार्य सम्पन्न गर्न समेत बैंकले सामाजिक कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ३६ देखि ५० प्रतिशतसम्म व्याजमा कर्जा लिएर विदेश जाने र विवाह सम्पन्न गर्ने पीडा हामीले बुझेका छौं । स्थानीयको यो पीडालाई सहयोगीले अन्त्य गरिदिएको छ । महंगो व्याजमा व्यक्तिसँग कर्जा लिने र ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या हुने गरेको डरलाग्दो घटनाहरुलाई यसले कम गरिदिने विश्वास हाम्रो रहेको छ । बैंकिङ सुविधाबाटै कल्याणकारी काम होस् भन्ने हेतुले बैंकले यस्तो सहुलियत कर्जा दिंदै आएको हो । महंगो व्याजमा कर्जा लिने व्यवस्थाले गरिब सँधै गरिब भएका हुन । अबको दुई बर्ष भित्र २ नं. प्रदेशको गाउँ गाउँमा गएर बैंकले आर्थिक शोषणको अन्त्य गर्नेछ । यसरी गरिएको सबै किसिमका कर्जाहरुको असुली अत्यन्तै सन्तोषजनक रहेको छ । व्याजदरमा हामी अन्य बाणिज्य बैंक सरह, अझ भन्ने हो भने कममा नै छौं । यस बैंकको कर्जा असुली अत्यन्तै राम्रो छ ।
ग्राहकहरुलाई आकर्षित गर्ने बैंकका सेवा तथा सुविधाहरु के कस्ता छन ?
बैंकको सुबिधा ठूला बाणिज्य बैंकहरुको जस्तो नभएता पनि यस क्षेत्रको लागि आवश्यक सुबिधाहरु सबै छन । हामी अब नयाँ पुस्ताले खोज्ने, रोज्ने किसिमका थप सुबिधाहरुलाई पनि छोटो समय भित्र ग्राहक माझ पु-याउनका लागि तत्परताका साथ लागेका छौं । २१औं शताब्दीको बैंकिङ सेवाहरुलाई सबै माझ ल्याइरहेका छौं । हाम्रो ठूलो आकर्षण भनेको ‘पर्र्सनल बैंकिङ तथा केयेर’ नै हो । बैंकमा बचतको लागि आकर्षक स्किमहरु रहेका छन् । बचतमा बालबालिका देखि अपाङ्ग र बृद्धाहरुलाई समेत समेट्ने किसिमका छन् । त्यस्तै किसान देखि ठूला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई समेत आकर्षित गर्ने बैंकसँग विभिन्न बचत योजनाहरु रहेका छन् । जसले गर्दा बैंकको यी बचत योजनाहरुबाट ग्राहकहरुले लाभ लिइरहनुभएको होला भन्नेमा मैले र बैंकले विश्वास लिएको छ । हामी हरेक गतिविधि तथा सेवामा ग्राहकसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्छौं । त्यसैले हाम्रो सेवाबाट ग्राहकहरु खुशी र सन्तुष्ट भएको हामीले पाएका छौं । हाल नयाँ वचत योजनालाई पनि अघि सारेका छौं । “सहयोगी सम्वृद्धी वचत खाता” सबै खाले सुविधाबाट सम्पन्न छ । यस बैंकले ग्राहकहरुको आवश्यकता लाई मध्य नजर गरी जलेश्वरमा “लकर”को सुविधा पनि ल्याएको छ । यसमा गृहिणीहरु लाई विशेष सहुलियत प्रदान गरेका छौं ।
तपाई र सहयोगी विकास बैंकका भावि योजना के कस्ता छन् ?
हामी समय अनुकुल बैंकलाई अगाडि बढाउने छौं । समयअनुसार नै ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै लैजाने छौं । भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा निर्माण कम्पनीसँग संझौता कार्य यहि महिना हुन्छ । यसले पूर्णता पाउनसाथ हामी आधुनिक भवनबाट आधुनिक सेवा दिंदै जानेछौं । त्यस्तै हामी सेवा विस्तारको प्रक्रियामा पनि छौं । यसको लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । हामी ३ जिल्लाबाट ५ जिल्लामा सेवा र सुविधा लिएर जाने सोचमा छौं । हामी बिस्तारै आफ्नो दायित्वको भन्दा सम्पत्ति सिर्जना हुने कामहरु गर्ने योजनामा छौं । ग्रामीण भेगमा आएका एनजीओ तथा बिकसित मित्र राष्ट्रहरुबाट प्राप्त सहयोगको पूँजीसँग सहकार्य गर्ने खालका योजनाहरुसँग मिल्दो जुल्दो भावी योजनाहरुको विस्तार गर्दे जाने छौँ । मेरो ध्यान जहिल्यै पनि बैंक, ग्राहक र लगानीकर्ताको हित र समृद्धिमा हुनेछ । बैंकले वित्तीय सेवा दिनुपर्छ, सेवा ग्राहकमुखी हुनुपर्दछ । त्यसैगरी बैंक लगानीकर्ताको हितमा हिड्नु पर्दछ । मेरो रोड म्याप त्यसैमा भइरहेको हुनेछ । बैंकले ग्राहकको आर्थिक उन्नतीका साथै सामाजिक परिवर्तन गराउने किसिमका गतिविधिमा लगानी गर्नुपर्दछ, ताकी बैंकको आर्थिक क्रियाकलापले रोजगारी र राजश्व समेत बढाएर राज्यलाई पनि योगदान पु-याउन सकोस् । आफ्नो कार्यक्षेत्र भएको स्थानमा वित्तीय सेवाका लागि सहयोगी बैंक एकमात्र भरपर्दो माध्यम बन्न सकोस भन्ने हिसावबाट अगाडि बढिरहेको छु । विकास बैंक पनि कुनै ‘क’ वर्गका बाणिज्य बैंक भन्दा कम हुदैनन् भन्ने उदाहरणलाई म प्रत्क्षरुपमा मेरो अनुभवद्वारा प्रमाणित गरेर देखाउने अभियानमा छु ।